W/Q:Ibraahin Yuusuf Axmed
Waqti dambe ayaan ogaadey bulshooyinkuna in ay shakhsiyaadka la mid yihiin oo ay midiba ta ka horraysa ku dayato. Tusaale ahaan maanta dunidu dhaqanka guud dadka maraykanka ayey kaga dayataa, haddii ay noqoto maamulka hawlaha, dharxidhashada, muusigga, timojarashada, sida loo socdo, sida loo hadlo i w m. Sidaas oo kale afka ay bulshada ilbaxa ahi ku hadasho bulshooyinka kale oo dhami waa ay bartaan. Carabigu mar buu ahaa afka ilbaxnimada iyo cilmiga oo barashadiisa qaarad walba looga iman jirey. Laatiinka iyo faransiiskuna mar bay halkaas oo kale gaadheen. Casriganina waa kii af ingiriisida. Laakiin innaga carabiduna waxay inagu haysaa raaf dambe.
Xumaan iyo samaanba dadku weligii joogto ayuu isu saamaynayey weligiina isu saamayn doonaa. Taasi siyaalo badan ayey ku fushaa, laakiin aaladda ugu muhiimsani waa luqadda. Barashada af qalaad, siiba mid xaddaarad leh, waa dan aad u weyn, waayo aqoonta iyo waayo-aragnimada afkaas ku jira ayaa laga dhaansadaa. Waxaanse marnaba bannaanayn oo liidnimo ah in ay ummadi afkeeda mid kale uga tagto, ogaan iyo ogaan la'aanba. Waxaa dadnimoxumo ah in uu qof weyni marka uu hadlayo ama wax qorayo dadka afka la wadaaga af kale wax ugu gudbiyo, ama sidii ilmo afbarad ah luqaddiisa mid kale ku walaaqo.
Maanta af soomaaliga labada sambab waxaa kaga taagan laba waran oo kala ah carabi iyo ingiriisi. Carabida waxaa laga dugsanayaa diin, ingiriisidana ilbaxnimo. Xaqiiqadaas ayuu qoraalkani ka duulayaa.
Soomaali badan ayaa marka ay hadlayaan ama wax qorayaan aan kala sooci aqoon soomaaliga iyo af kale oo ay wax ka yaqaannaan. Waxaa jira kuwo wadaaddo u badan oo af carbeedka u qiiraysan, oo malaha rumaysan afkaasi in uu kooda ka barako badan yahay. Malaha waxay moodayaan ereygii carabi ah ee afkooda ka soo baxaba in Ilaahay ajar uga qorayo. Bal u fiirso marka ay dadkooda la hadlayaan sida ay carabida ugu dhiiqoonayaan. Bal u fiirso waxa ay hadal, maanso, maahmaah iyo sheeko carbeed halaloobinayaan, dabadeed sidii aayad Qur'aan ah erey erey u fasirayaan. Taas waxaa ka daran marar badan ayey fekerkooda soomaaliga ah horta af carbeed soo mariyaan ka dib soomaali u rogaan. Sidaas waxaa macnodarro ugu luma waqti iyo faham badan. Runtii marka ay dadkooda la hadlayaan maba mooddid in ay af soomaali ku hadlayaan, oo qofka aan carabida aqooni wax yar buu ka fahmaa. Mid kuwaas ka mid ah oo aanu mar doodnay wuxuu ii qirtay af soomaaliga inta uu ka yaqaan haddii uu carabi ku beddelan karo in uu ku beddelan lahaa.
1) In la moodayo af carbeedku in uu af soomaaliga ka qiimo sarreeyo. Wadaaddo badan oo daacad ah ayey la tahay carabidu iyaga iyo dadkoodaba in ay soomaaliga uga roon tahay. Waa dad aqoon liita oo maskaxda laga haysto una baahan wacyigelin iyo baraarujin.
2) Qorshe ah in af soomaaliga, sidiisaba, laga takhalluso oo af carbeed lagu dooriyo. Hawshaa waxaa soo abaabusha Jaamacadda Carabta hay'adaheeda dhaqanka, waxaana u fuliya dad soomaaliyeed oo inta badan gashan shaadh diineed. Taasi damac qowmiyadnimada carbeed lagu durkinayo, laguna meelmarinayo heshiiskii rakhiiska ahaa ee Ina Carte Qaalib iyo Ina Siyaad Barre mugdiga lagaga saxiixday.
Sida hantigoosiga maaddiga ah lagu yaqaan, ganacsatada danaysatada ahi si ay jeebka dadka u gasho horta waa in ay dareenka ka gashaa. Dabadeed waxaa la ogaadey in dareenka qofka soomaaliyeed maanta u nugul yahay ereyada carabida iyo diinta u dhow, gaar ahaan kuwa khayrka ku bishaaraynaya. Bal u fiirso waxa erey carabi ah, oo inta badan "al" laga bilaabay sida sac hebed ah dadka soomaalida maanta lagu maalo. Tusaalahaas waxaa ka mid ah: al-Hudaa, ar-Raxmah, al-Itixaad, al-Bishaara, an-Nuur, al-Furqaan, at-Taqwaa, al-Ammaan, al-Islaax, al-Carafaat, al-Amal, al-Xaq, ash-Shifaa, al-Bshraa i w m.
Carabidu waa afkii diinta, ayaa lagu doodaa. Laakiin haddii ay carabidu diinta wax tarayso maxaynu habeen iyo maalin u aragnaa carab aan wax uu ku tukado iyo si uu u tukado aqoon? Carab badan maxay qaadanwaa ugu noqotaa marka ay arkaan soomaali aan carabi aqoon oo haddana Qur'aanka xafidsan diintana aqoon sare u leh? Dhanka kalena carabku wuu ku qoslaa marka uu arko soomaali Qur'aanka xafidsan haddana aan aayad keliya ka fahmi karin. Diinta iyo luqaddu waa laba wax oo isa saameeya laakiin kala duwan. Haddaba si ay barashada diintu u fududaato maxaa diidaya in af soomaali loo soo raro, sida imikaba la bilaabay, taas oo aan fahamkeeda oo keliya sahlayn ee af soomaaliga qudhiisa siinaysa awood xaddaaradeed?
Fekerka ku saabsan soomaaliyeynta diintu weligii waa uu soo jirey. Ugu yaraan waxaynu hubnaa in uu soo taxnaa ilaa maalintii uu Sheekh Yuusuf Kowneyn higgaadda carabida soomaaliyeeyey. Culimo badan baa xilliyo kala duwan maanso af soomaali ah ku koobtay sifooyinka Eebbe, siirada Nebiga, tiirarka Islaamka i w m. Sida aynu garan karno dadkaa dadaalka badan waxaa ka hor timid dhibaato ah af soomaaliga oo aan qornayn, taas oo ka joojisay in ay hawshaa sii wadaan. Mar walbana waxaa jirey fikrado dibusocod ah oo fekerkaa firfircoon ka soo hor jeedey. Xataa siddeetanaadkii dhowaa ee qarnigii dhammaaday, markii ugu horraysey ee qayb Qur'aanka ka mid ah macnaheeda buug af soomaali ah lagu soo bandhigay, dad badan baa argagaxay oo moodey in macsi la galay. Tobaneeyo sano oo kale ayey qaadatay in aynu aragno Qur'aanka Kariimka ah oo af soomaali ku abyan. Mar kale ayey maskaxdii dibusocodka ahayd qaylo cirka ku shareertay, iyada oo ku andacoonaysa in sidaas macno badani Qur'aanka kaga lumayo, dadkuna barashada carabida ka jeesanayo. Labadaas eedood waxaa ka dhalanaya laba weydiinood: 1) Muxuu macno badani Qur'aanka uga lumayaa, af soomaaligu sow af nool oo wax lagu tarjumi karo laguna fahmi karo ma aha? 2) Ka jeesashada carabidu maxay qalad u tahay haddii laga maarmo? Waxaa xaqiiqo ah cidda sidaas u doodaysaa in aanay Qur'aanka, af soomaaliga iyo soomaalida toona dan ka lehayn, ee ay carabida uun ka fekerayso, sababihii aynu soo xusnay dartood.
Tarjumidda macnaha Qur'aanka waxaa raacay tarjumaado kale oo diinta ah. Kuwaas dhammaantood in kasta oo ay qaladdaad farsamo iyo luqadeed oo aad u badani ku jiraan, haddana waa bilaw guul leh oo horumar laga filan karo.
Haddii mas'alada diinta halkaa lagu dhaafo, carabigu waa af leh xaddaarad culus oo ay ku qoran tahay aqoon aan xaddi lahayni. Haddaba kuwa carabida lagu ibtileeyey in aanay waxaas oo feker iyo taariikh ah waxba ka soo tarjumin ayaa waano qaadasho inoogu filan.
Waxaa iyaguna jira dad mas'uul sheeganaya oo haddana afkooda afaf qalaad kula kacaakufa. Tusaale ahaan haddii uu dadweynuhu maqlo "Saaxada siyaasadeed" boqolkiiba imisa qof ayaa fahmi kara ereyga "saaxa"? Waa erey-saxaafadeed carbeed oo meelahaas laga soo helay. Waxaa si doqonnimo ah loo adeegsadaa ereyo ay ka mid yihiin "wasiir khaaraji", "wasiir daakhili", "ra'iisal barlamaan", "wasiir difaac" i w m.
In erey qalaad oo mid soomaali ah lagu bahdilay la macmacaansado waxaa ka sii liidata in ereygaas qalaad si qaldan loogu dhaqmo. Tusaalahaas oo aad u badan waxaa ka mid ah "Hay'adaha dawliga ah". Carabi ahaan ereygu wuxuu ahaa "duwali" oo ah wax caalami ah. Laakiin waxaa la moodey in uu ka yimid "dawlad", Dabadeed waxaa meel walba lala taagan yahay "hay'adaha dawliga ah" oo laga wado "hay'adaha qaranka".
Markii uu Ingiriisku innaga iyo dunida kaleba cilmi iyo farsamo horumarsan inagu qabsaday, wax dabiici ah ayey ahayd in uu saamayn weyn inagu yeesho, siiba luqadda. Sidaas oo ay tahay haddana wuxuu inagu yeeshay saamayn aad uga yar ta uu bulshooyin kale ku yeeshay. Sababtu waa af soomaaliga oo xoog iyo hodantinimo badan lahaa, isla markaa ahaa afka keliya ee ina mideeya (haddii aan lahjadaha koonfurta qaarkood af gooni ah lagu sheegin). Taa waxaynu kaga duwanayn bulshooyin kale oo afaf yaryar oo badan ka kala hadli jirey kuwaas oo markii ay dawladoobeen ku khasbanaaday in ay afka isticmaarka isku fahmaan.
Waxaase jirey laba dhinac oo ay afafka shisheeyuhu inaga soo galeen. Mid waa dadkii waqtigii gumeysiga wax bartay oo si ay mustawahooda ijtimaaci kor ugu qaadaan afkii ay wax ku soo barteen ku hadaaqi jirey. Kuwaasi xeeshaa liidata kuma ay liibaanin oo si ba'an ayey bulsho weyntu ugu qososhay, waana tii loogu heesay:
Dhinac kale oo uu afka gaaladu inaga soo galay waa ereyo looga maarmi waayey maamulkii iyo noloshii casriga ahaa ee iyaga laga dhaxlay. Dugsiyada, xafiisyada, qalabka iyo waxyaalihii inagu cusbaa oo dhan ereyo ingiriisi, talyaani, faransiis ama carabi ah ayaa loo adeegsadey. Weliba taasi waxaa ay u sii darnayd intii aan qorista af soomaaliga iyo ereybixinta la bilaabin. Ereyadaas waxaa ka mid ah: xafiis (office), teeb (type), buug (book), Eerboodh (airport), looyar (lawyer), barafasoor (professor), boolis, bilays (police) i w m.
Laga soo bilaabo sannadkii 1972 af soomaaligu wuxuu noqday af xaddaaradeed, ka dib markii la qoray ee wax lagu bartay waxna lagu qoray, isla markaa si firfircoon ereybixin loogu sameeyey. Taasi waxay ka soo yar saartay dayacii iyo darxumadii uu weligii qabey, waxayna dabaqabasho u noqotay suugaantii iyo waayo-aragnimadii lumi jirey. Laakiin ma ay joojin weerarkii ba'naa ee debedda kaga imanayey. Tayoxumo aad u weyn oo dadkii waxbarashada af soomaaliga ku qalinjebiyey laga arkay ayaa dhiirri gelisay in ay kuwa afafka kale wax ku bartay ismuujiyaan. Waxaa kale oo soo baxay wadaaddo kuwii hore ka duwan oo ay carabida iyo diintu isku mid u yihiin. Gaar ahaan labadaas xaaladood oo waxyaalo kale ku tiirsan ayaa af soomaaliga weerarka debedda u nugleeyey.
Ereyada iyada oo aan laga fiirsan afkeenna iyo dhaqankeenna la falgalay waxaa ugu caansan "land". Sida la wada yaqaan ereygu waa magac af yurub ah oo macnihiisu yahay dhul ama dal. Markaa ayey inoo bixiyeen "British Somaliland", "Italian Somaliland" iyo "French Somaliland". Innaguna sidii ilmo afbarad ah ayeynu kaga daba dhawaaqnay.
Fahmodarrada sidaas ah ayaa u sabab ahayd in sannadkii 1991, markii lagu dhawaaqay gooni isu taagga "Somaliland", dhulkaas lagu soo celiyo magacii gumaysigu ula baxay. Ma garan karno sabab macno leh oo kelliftey in magacaa lala baxo, waayo in uu af qalaad yahay ka sokow ma leh macne dhul iyo bulsho soomalida kale ka gooni ah. Dhul soomaalida kale ka gooni ah wuxuu ku xaddidmi lahaa oo keliya haddii lala baxo "British Somaliland". Dabcan waxay noqon lahayd magacaabid taa hore ka sii liidata. Haddii ay in wax la kala qaybiyo noqotay meesha waxaa ku habboonaa "Waqooyiga Soomaaliya", kaas oo ugu yaraan xaddidaya degaan ama jiho gaar ah oo ka mid ah dhulka ay soomaalidu degto.
Laakiin waxaaba la arkay mid tii hore ka daran. Qayb kale oo Soomaaliya ah ayaa loo bixiyey "Puntland". Magacani qaldanaanta iyo qalaadnimada kii hore kama duwana, waxaase dheeraad u sii ah laba dhibaato. Marka hore xarafka P dhawaaqa af soomaaliga kumaba jiro, dabadeed waxaad maqlaysaa iyada oo loogu dhawaaqayo B, "Buntlaand". Markaa carruurta dugsiga dhigata ma waxaa lagu karsbaashaa barashada dhawaaqa xarafka P ee aan afkooda hooyo ku jirin carrabkooduna karayn?
Cilladda kale ee magacan ku jirtaa waa ereyga "bunt" oo aan wadan magacii ay faraacinadu dhul ama dal u yaqaanneen, kaas oo aanan qudhaydu aqoon. Magaca "land" ee lagu suuxay waa tarjumidda afka saancadka. Tusaale ahaan carabtu magacaa waxay u tarjumatey "Bilaad Bunt", ummad walibana sida uu ereyga "dhul" afkeeda ku yahay oo ay raacisay "bunt". Markaa innaga oo ah cidda uu magacu tooska u khuseeyo maxaynu ugu khasban nahay in aynu u qaadanno sida ay reer yurub u tarjunteen?
Labada magac intaa waxaa u dheer iyada oo magaca "land" iyo ka la socda shaqalkooda dheer la gaabiyo, taas oo ingiriisida lagaga dayday. Haddii af soomaali lagu qoro waxay noqonayaan "Soomaalilaand" iyo "Buntlaand".
Sida aynu maanta af ingiriisida ugu dullownay lagama sheekayn karo. Qalabkeenna warfaafinta ayeynu taa uga dhigan karnaa muraayad aynu isku daawanno. Bal u fiirso bogagga Inter Net-ka badankooda. Waxa ku qoran boqolkiiba imisa ayaa ingiriisi ah? Boggii awelba shisheeye loogu talogalay isagu ha inaga ceeb la'aado.
Warfaafinteenna maanta waxaa diyaariya ama tifotira dad badankooda af soomaaliga iyo adeegsigiisa dhibaato ka haysato. Taa waxaa badankooda u dheer aqoon yari ka haysata cilmiga saxaafadda ay faraha kula jiraan. Laakiin tan dambe waa mas'alo kale oo waqtigeeda leh.
Inta aan anigu og ahay, wargeys daabacan oo maanta af soomaali ku soo baxa waxaa ugu af dheer Jamhuuriya, oo ka soo baxa Hargeysa. Isagana marka aad akhridid waxaad ogaanaysaa af ingiriisida iyo soomaaliga ku qorani in aanay aad u kala badnayn. Dhammaan magacyada bilaha waxaa si aan dareen lahayn loogu qoraa af ingiriisi: April, June, Augost, September, November, December…! Magacyada bilaha ee aynu ku dhaqannaa in ay af yurub ka soomaaliyoobeen macnaheedu ma aha in aynu sidooda u qorno, ee waa in ay xarfaha iyo higgaadda af soomaaligu ina hagaan. Jamhuuriya iyo kuwa la midka ah waxaynu ku saxaynaa: abril, juun, ogost, sebtembar, nofembar, disembar...
Ceebaha kale ee saxaafadda soomaalida maanta halkan kaga hadli mayno, gaar ahaan wargeyska Jamhuuriya oo fikradaha iyo macluumaadka uu akhristaha u soo gudbiyaa aanay ka duwanayn waxii lagu qori jirey Xiddigta Oktoobar. Kala duwanaanta keli ahi waa Xiddigta Oktoobar oo muxaafid ahaa iyo Jamhuuriya oo mucaarad ah. Magaca wargeyska, ee aan sidiisaba soomaaliga ahayn, ayaa quus inoogu filan.
Marka horumarka ama dibudhaca af soomaaliga laga hadlayo, in "af soomaali" uun la iska yidhaahdo ma aha, ee waxaa khasab ah in laga eego dhinacyo kala duwan, gaar ahaan saddexda dhinac ee kala ah: hadalka, qoraalka iyo halabuurka (halabuur halkan waxaan ka wadaa oo keliya suugaanta la curiyey laakiin aan daabacnayn). Waxaa kale oo waajib ah in loo kuurgalo kala duwanaanta gobollada iyo ururrada bulshada, taas oo fududaynaysa helista sababaha horumarka ama dibudhaca.
Aniga oo aqoontayda iyo waayo-aragnimadayda shakhsiga ah kaashanaya waxaan ku dhiirran karaa mas'aladaas natiijadeeda in aan ku soo ururiyo sidan hoos ku qeexan, aniga oo saddexda qodob mid walba siinaya dhibco togan oo u dhexeeya eber ilaa shan. Waxaanan hubaa qiyaastaydani in aanay xaqiiqada ka durugsanayn.
Haddii aynu si gaar ah ugu sii dhabbogalno labada qaybood ee duruuf ahaan ilaalinta iyo horumarinta af soomaaliga u xilsaaran, waqooyi iyo koonfur, waxaa inoo soo baxaysa natiijo ay koonfurtu guusha ku helayso, taas oo lid ku ah dabcigii hore ee bulshada soomaalida lagu yaqaanney. Dabcigaasi wuxuu ahaa in wax kasta oo af soomaaliga iyo fankiisa ah ay bulshada waqooyigu hormuud ka ahaan jirtey. Tusaale ahaan maanta waxgaradka koonfureed badankoodu fekerkooda qoraal soomaali ah waa ay ku soo gudbin karaan, laakiin kuwa la siman ee reer waqooyi in yar ayaa taa samayn karta, oo ingiriisida ayey la magansadaan. Xasuusqorka aayaha leh ee Xuseen Cali Ducaale, Jaamac Maxamed Qaalib iyo Maxamed Siciid Gees, oo saddexduba soo bandhigay waayo-aragnimadooda siyaasadeed, ayaa tusaale u ah sida ay waxgaradka gobolkaasi ugu fashilmeen adeegsiga afkooda. Dadka gobolkaas ku dhaqan buugga af ingiriisida ku qoran ayaa weli uga qiimo sarreeya ka soomaaliga ah.
Ku kala horraynta waqooyi iyo koonfur ee adeegsiga qoraalka af soomaaliga maanta sababteeda waxaynu u aanayn karnaa:
Dhaqan xaddaaradeed kastaa gobolka uu ka soo baxo muddo dheer ayey gobollada kale oo dhami higsadaan. Muusigga iyo masraxa (ruwaayadda) ee kontonaadkii qarnigii tegey waqooyiga sida weyn uga hanoqaaday waxay keentay in ilaa maanta taa lagaga daydo. Waxay kale oo keentay in ay dadkaasi wax kasta oo muusig iyo ruwaayad ku saabsan u niyadsamaadaan, isla marka ay buugga iyo wargeyska soomaaliga ah ka sharsanayaan dulmigii Xiddigta Oktoobar iyo Tusaalooyinka Madaxweynaha. Taas waxaa la mid ah sida ay reer koonfurku maanta qoraalka iyo akhriska ugu jajaban yihiin, isla markaana badankoodu maansada u arkaan "dhaqan baadiye".
Legdanka af soomaaliga iyo afafka qalaad marka ay noqoto reer jabbuuti waxay gelayaan kaalin liidata. Waa dad soddon sano ku dhowaad dawlad ahaa, haddana aan wargeys keliya afkooda ku soo saarin, buugna hadalkiiba daa. Waa dad iyaga oo af, dhaqan iyo taariikh leh isku xukumay in ay intaba Faransiis magan iyo marti ugu noqdaan. Ugu yaraan dhawr iyo tobankii sano ee ay soomaalida kale burbursanayd gobolkaasi wuxuu helay fursad qowmiyadeed oo uu afka iyo dhaqanka door weyn ku yeelan lahaa. In kasta oo la moodo in uu Ismaaciil Cumar Geelle soomaalinnimada uga wacyi roon yahay odaygii uu talada ka dhaxlay, Xasan Guuleed Abtidoon, haddana waxa keliya ee uu taas u qabtay waa in uu mar soomaali badan dalkiisa ku shiriyey. Taasna adeerkiiba waa uu sameeyey sannadkii 1991. Haddii aanu jiri lahayn iftiinka yar ee fanka iyo maansada ah gobolkaasi wuxuu noqon lahaa xabaal madow.
Ugu dambayn aan ina xasuusiyo afka faransiisku in uu ka mid yahay kuwa dunida ugu tiirar adag. Waa kii qarnigii 18-aad shiday dabka ilayska iyo diirrimaadka badan ee reer galbeedka weli u baxaya, kaas oo ay waxgarad faransiis ahi huriyeen loona bixiyey Ifin (Enlightenment). Afkaa waxaa ku qoran qayb aad u weyn oo ka mid ah ilbaxnimada iyo waayo-aragnimada aadamiga, waxaa ku hadla boqollaal milyan oo dad ah, wuxuuna leh yahay dawlad iyo hay'ado xoog leh oo ilaaliya. Sidaas oo ay tahay dhawr sano hortood waxaa dalkaa laga soo saaray sharci xaarantimaynaya in uu mas'uul faransiis ahi afkiisa erey ingiriisi ah ku daro isaga oo mid faransiis ah heli kara. Dadkaasi waxay sidaas u yeeleen in ay wacyi u leh yihiin afku in uu yahay wax lumi kara ama nasakhmi kara.
Daabacadii Ibraahim Yuusuf.. GUJI | JAWAABTII C/WAAXID... GUJI | Dec 8, 2003
AFEEF: Waxaa qalinka cas qoraalka ku ku muujiyey C/Waaxid.